Badminton: hisokatra ho an’ny sokajy rehetra ny «Tournoi d’ouverture » | NewsMada
Badminton: hisokatra ho an’ny sokajy rehetra ny «Tournoi d’ouverture »
Hosokafana amin’ny alalan’ny fifaninanana antsoina hoe “tournoi d’ouverture”, hatao ao amin’ny kianja mitafon’Ankorondrano, ny taom-pilalaovana 2019, eo amin’ny taranja badminton, hatao ny 23 sy 24 marsa ho avy izao. Araka ny fanazavana, hisokatra ho an’ny sokajy rehetra ity lalao fanokafana ho an’ny taona 2019 ity, izany hoe handray anjara ao avokoa ny mpilalao, eo amin’ny sokajin-taona latsaky 11 taona hatramin’ny 17 taona. Efa nisokatra ny fisoratana ary hifarana ny sabotsy ho avy izao.
Mahakasika ity fifaninanana ity hatrany, tontosaina ny sabotsy 23 marsa tontolo andro ny fifanintsanana izay hiseho amin’ny alalan’ny “éliminatoires directs”. Ny alahady kosa no hanatanterahana ny lalao famaranana. Sady fanombohana ny taom-pikatrohana moa ity lalao ity no fanomanan-tena ihany koa amin’ny lalaon’ny nosy, raha ny fanazavana hatrany.
Nanambara ny filohan’ny federasiona malagasy ny badminton, Ravalison Jean Aimé fa miankina amin’ny valin’ny fifantenana ireo mpilalao hiatrika ny lalaon’ny nosy ny tohin’ny fandaharam-potoan’ny federasiona. Toy ny mahazatra anefa, hisy lalao miisa 3, mialohan’ny fiadiana ny tompondakan’i Madagasikara, dia ny “Tournoi de Pâcques”, “Tournoi de l’indépendance” ary ny “Tournoi de vacances”.
Mbola miandry ny fiantsoana avy amin’ny Minisitera kosa vao afaka hanomboka amin’ny tena fanomanana ireo atleta hiatrika ny lalaon’ny nosy, hotanterahina ny volana jolay izao, any Maorisy, ny eo anivon’ny federasiona, hoy hatrany Andriamatoa Ravalison Jean Aimé. Tsy maintsy miandry ny isan’ny atleta handeha mantsy vao afaka manomboka amin’ny fanazaran-tena.